Iintlambo ezili-7 kunye nabaphangi bokwenene. Zakudala, ezembali kunye nothotho. | Uncwadi lwangoku
Ifowuni entsha yesaga yefilimu ye IPirates yeCaribbean Ngokuqinisekileyo ngaphezu komfundi omnye apha unomdla ngabalinganiswa bakhe kunye nokuzonwabisa kwakhe. Kodwa Ndisuka kwisikolo esidala. de Kudala uJohn Isilivere, Ubuncinane, kwaye kuphela. Kodwa zininzi iipirate, ziyinyani kwaye ziyinyani, kwaye kubhaliwe malunga nazo ayinakubalwa.
Ke ndizikhethile ezi Amabali ayi-7 izolo, namhlanje nangonaphakade. Ezimbalwa zakudala ezivela ISabatini, iSalgari kunye neDefoeIsincoko endaweni yenoveli kuKapteni Kidd, ngo URichard Zacks. Incwadana yokuqala yeNobel Steinbeck. Kwaye zimbini trilogies: leyo ye IVazquez-Figueroa kunye ne UJames L. Nelson.
1 Umphathi weGazi-URafael Sabatini
2 Abakhangeli-uJames L. Nelson
3 Imbali ngokubanzi yokuphanga kunye nokubulala abaphangi abadumileyo - uDaniel Defoe
4 USandokan - uEmilio Salgari
5 IPirates - u-Alberto Vázquez-Figueroa
6 IPirate Hunter-URichard Zacks
7 Indebe yeGolide - uJohn Steinbeck
Umphathi wegazi -Rafael Sabatini
Enye ye zakudala ezinkulu Ukusuka kwinoveli yokuhamba ngenqanawa kunye nepirate. Enkosi ikakhulu kwifilimu yeklasikhi ngokulinganayo ekhokelwa ngu UMichael Curtiz ngo-1935, malunga U-Erroll Flynn no-Olivia de Havilland ongenakulibaleka.
Igazi likaPeter, ugqirha ngenkulungwane yeshumi elinesixhenxe eNgilani, umtyholwa ukuba yinxalenye ye iqhinga ngokuchasene noJacobo II kwaye uyabanjwa athunyelwe ngokungekho sikweni kumasimi eBarbada. Apho iGazi kunye nabahlobo bakhe beba inqanawa yaseSpain kwaye babe ngabaphangi abathi kungekudala bazuze ubutyebi nodumo.
Umlindi -UJames L. Nelson
Esi sihloko yeyokuqala trilogy yenziwe nge Ikhoboka y Ubuzalwana bonxweme. Ine-protagonist UTomas marlowe, owoyikayo ebutsheni bakhe njengesigebenga, ngoku ungumdibaniselwano kurhulumente waseVirginia ekukhuseleni amanxweme alo. Utyunjwe njengomphathi wePlymouth Prize, inqanawa ephambili yeli koloni, ukuzikhusela kuMzalwana woNxweme, iqela labaphangi elikhokelwa nguJean-Pierre LeRois, umntu omdala owayeqhelene noMarlowe.
Lo mbhali waseMntla Melika uqwalaselwe indlalifa kwisimbo kunye neethoni de UPatrick O'Brian.
Imbali ngokubanzi yokuphanga nokubulala ezona zixhobo zidumileyo - UDaniel Defoe
Esi sihloko siqwalaselwa owona mthombo uphambili kunye nowona ubalaseleyo kokubini kubafundi beMbali yePiracy kunye nababhali abanike ithoni yentsomi yothando kubaphangi.
La icandelo lokuqala yapapashwa ngo-1724 phantsi kwegama elingu UCaptain Charles Johnson. Kodwa emva kwakhe wayefihlile, njengoko wayefundile kamva, UDaniel Defoe. yakhe I-17 iibhayografi Abaphangi ababalaseleyo besiNgesi belo xesha (UAvery, uMary Read, iBlackbeard…), Ihamba kunye nezimvo ngokubanzi ngobuqhetseba, iingozi zayo kwizizwe, oonobangela kunye noncedo olunokubakho. Inxalenye yesibini ijongene nabaphathi beenqanawa kunye nabasebenzi abasebenza eMadagascar, kunxweme lwaseAfrika nakuLwandlekazi lwaseIndiya.
ISandokan -Emilio Salgari
USandokán ngumlinganiswa ophambili we Uthotho lwenoveli yolonwabo ibhalwe ngumbhali wase-Italiya uEmilio Salgari. Kwaye indala yendawo, njengam, ngokuqinisekileyo uyamkhumbula u Yehova Uthotho lwee-70s zeTV apho bonke abantwana babefuna ukuba yile pirate ikhaliphileyo evela eMalaysia. Okanye iPerile yaseLabuán, intombi yakhe. Bandinike loo ncwadi ndiyigcina njengegolide kwilaphu.
USandokan ngu inkosana ye-borneo ukuba ufunge ukuziphindezela kwi-Bhritane, eyathi yamhlutha itrone yakhe yabulala nosapho lwayo. Ngesi sizathu inikezelwe kubugqwirha ngegama lesidlaliso le- Ingwe yaseMalaysian. Unabasebenzi kunye nabahlobo abangenamiqathango, njengamaPhuthukezi Yanez, kwaye isiseko sabo sokusebenza sisiqithi se Mompracem.
Kwaye kwiSalgari kwakhona enye ipirate, Icorsair emnyama, eyayilungiselelwe ifilimu nomdlali omnye owayedlala iSandokan, i-Indian Kabir Bedi.
IPirates -Alberto Vázquez-Figueroa
Awunakuphulukana nesabelo sokuzalwa kunye nabadumileyo UJacaré jack, Yenziwe nguVázquez-Figueroa, ngokufanayo neziganeko ezinkulu. Le noveli ibalisa ibali elipheleleyo lezenzo, iimvakalelo kunye nobuqhetseba, oku kuyinkwenkwezi koku Umntu omdala waseBritane wabucala kunye nomzingeli omncinci kakhulu weeperile ISpanish, uSebastián Heredia. Yisihloko sokuqala se-trilogy esiqhubekayo I-Negreros y ULeon Bocanegra.
Umzingeli wepirate -URichard Zacks
Ngaphezulu a incwadi yembali Kunoveli, le ncwadi Ukudibanisa intsomi ukuba uKapteni uWilliam Kidd wayengumpirate kunye ne-buccaneer enegama elibi. UZacks usibonisa ukuba, enyanisweni, U-Kidd wayeyindoda enomdla kwinkonzo yesiNgesi, enoxanduva lokuthimba abaphangi kunye nokubanyanzela ukuba babuye ubuncwane babo. Ijolise ikakhulu kwi-duel ethi, kulo lonke ikhondo lomsebenzi wakhe, uKidd wayenompirate odumileyo, uRobert Culliford. Ngokunjalo, ngobuchule iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ikwenze, emhlabeni nasemanzini, ngenkulungwane yeshumi elinesixhenxe.
Indebe yegolide -UJohn Steinbeck
UHenry Morgan Ngenye ye abadumileyo nabaphangi basebukhosini abanempikiswano kwavela ngexesha apho ubuqhetseba yayingumsebenzi osemthethweni kunye nothando lobuzwe olwaluyinxalenye yemfazwe phakathi kweSpain neNgilani. Umnyulwa okhethiweyo ngoo-buccaneers ngo-1666, wakhokela iphulo elatshabalalisa iPort-au-Prince kunye nePorto Bello.
Ibhaso likaNobel UJohn steinbeck ijolise kweli bali kwi ukoyiswa kwePanama (iNdebe yeGolide), apho uMorgan wemka khona ngempango eninzi. Yapapashwa ngo-1929, Kwakuyincwadi yakhe yokuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iintlambo ezili-7 kunye nabaphangi bokwenene. Zakudala, ezembali kunye nothotho.